Mampanantena Ireo Shinoa Manampahefana Ao An-toerana Fa Tsy Hamela Ny Fanatanterahana Fetiben’ny Hena Alika Ao Yulim Amin’ity Taona ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2016 3:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, 日本語, English
Tao anatin'ny tsindry nataon'ny vahoaka, natsahatry ny governemanta ao Guangxi ilay Fetibe malaza ho an'ny Hena Alika ao Yulin, izay nomanina hatao amin'ity taona ity ny 21 Jona sy 22 Jona. Araka ny voalazan'ireo mpikatroka mafàna fo mpiaro biby ao Hong Kong, nanome toky ireo manampahefana ao Guangxi fa hanao izay tsy hisian'ny famonoana faobe ny alika, amin'ny fampiharana ireo lalàna mifandraika amin'ny resaka fahadiovana sy sakafo azo antoka ho an'ny daholobe.
Ho valinteny amin'ny fitarainan'ilay mpikatroka mafana fo, ny gazety nasionalista mpanàla azy “Global Times” nanosotra ireo media tandrefana sy ireo mpikatroka mpiaro ny zon'ny biby ho “mpanao an-tendrony ara-kolontsaina / mahery fihetsika”:
Na izany aza, tsy avy any ivelan'i Shina ihany no niainga ny tsindry hampitsaharana ilay fetibe, na avy amin'ireo Shinoa mpikatroka mafàna fo. Vao haingana ny tarika mpandalina ny hevi-bahoaka ao amin'ny People.com no nampanao fitsapankevitra tety anaty aterineto, ka tao anatin'ireo 30.000 namaly ny fanadihadiana dia 64% no manohana ilay fandraràna ny fihinanana hena alika. 24.4% monja tamin'ireo namaly no nanohitra ilay fandraràna.
Michael Tien Puk Sun, solontenan'ny Kaongresim-Bahoaka avy ao Hong Kong, nilaza tamin'ny mpanao gazety hoe nanome toky ny governemantan'i Yulin fa tsy hisy ny fandrasàna alika eny imasom-bahoaka. Tsy manakana ny olona tsy hihinana hena alika any an-tokantranony anefa izy ireo.
Nanamafy ireo mpikatroka mpiaro zon'ny biby avy any Guangxi fa hatreto dia tsy misy sorabaventy fanentanana momba ilay fetbe ao Yulin. Na izany aza, misalasala ry zareo manoloana ny ho fahamatoran'ny governemanta hampihatra ilay lalàna, na ho toy ny fomba iray fotsiny ny fanapahankevitra hampitsahatra ilay fetibe mba hanadiovan-dry zareo ny tànany raha sendra misy hetsika ara-kolontsaina “miseho tampoka” ao an-toerana. Ny sasany manahy koa hoe ny fitsirihana akaiky atao amin'ilay fetibe dia mety hifotitra aminy ihany satria betsaka ny olona no efa mahafantatra momba an'i Yulin ary mandeha mivahiny any noho ny resaka hena alika.